Mogadishu Journal » 2019 » May » 13
Imtixaanka dowladda oo hakad la galiyay
Mjournal :-Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre, ayaa ku dhawaaqay in la joojiyay Imtixanakii mideysnaa ee dowladda qaadeysay maalmihii u danbeeyay kadib markii la helay Su’aalihii lagu galayay Imtixaanka. Wasiir Goodax waxa uu sidoo kale sheegay in ...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta magacaabay guddi ka shaqeeya dhamays-tirka qorsha dayn cafita dalka oo meel gebo gebo ah maraya. Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda ayaa guddoomiye looga dhigay guddiga...
Madaxtooyada Kenya oo jawaab ka bixisay in la waayay Madaxweyne Uhuru Kenyata
Mjournal :-Maalmihii la soo dhaafay waxaa Baraha bulshada lagu faafinayey in la waayey Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyata,waxaana dadka reer Kenya qaarkood ay baadi goobayeen,hayeeshee maalmo kadib waxaa ka jawaabay xafiiska Madaxtooyada Kenya. Afhayeenka madaxweynaha Kanze...
Faah faahin ku saabsan Askari ka tirsan ciidamada Uganda oo Askar kale ku dilay Xalane
Mjournal :-Askari ka tirsan Ciidamada Uganda ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa maalintii Sabtidii xerada Xalane ku toogtay Saddex askari oo ka tirsan Ciidanka AMISOM. Sida wararka sheegayaan askariga toogashadan geystay ayaa waxa uu muran kala dhexeeyay Kormeerihiisa, kaasoo...
Mohammed bin Salman, Saudi Arabia’’s crown prince, on Friday defended China’s use of concentration camps for Muslims, saying it was Beijing’s “right”. “China has the right to carry out anti-terrorism and de-extremisation work for its national security,” Prince Mohammed, who...
Ra’iisul wasaare Kheyre oo kormeeray Taliska qeybta guud ee Booliska iyo baraha ciidamada
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda fedreaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre, oo caawa kormeer amni ku tegay taliska Qaybta Guud ee booliiska gobalka Banaadir iyo Isgoysada ay ku sugaynyihiin ciidamada sugaya amniga caasimadda, ayaa booqday xarunta hagista iyo ka...
Mjournal :-Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa shaacisay in la weeraray Afar Markab oo ay leedahay xilli ay marayeen meel u dhow biyo xadeedka dhinaca Gacanka Cumaan. Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan inaysan jirin weerarkaas cid ku dhimatay ama ku...
Buundo muhiim u aheyd isku socodka Gobollada qaar ee dalka oo go’day
Mjournal :-Wararka laga helayo Magalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan inay go’day Buundada deegaanka Ceel-gaal oo ka mid ah deegaanada hoostaga Magalada Baladweyne. Buundadaas ayaa muhiim u aheyd isku-socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala goosha...
Shir Garoowe uga soo dhamaaday madaxda maamulada Puntland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed
Mjournal :-Shir saddex-geesood ah ayaa maanta uga furmay magaalada Garoowe maamul-gobolleedyada Puntland, Hirshabeelle iyo Koonfurgalbeed,iyadoo inta badan shirka diirrada lagu saarayo iskaashi ay yeeshaan maamullada. “Runtii waxaa sharaf weyn noo ah inaan halkan ku qabsano...